Dawladda Taiwan Oo Somaliland La Gashay Heshiis Ay Ku Casriyeynayso Cisbitaalka Guud Ee Hargeysa | Gaaroodi News
Dawladda Taiwan Oo Somaliland La Gashay Heshiis Ay Ku Casriyeynayso Cisbitaalka Guud Ee Hargeysa
Hargeysa (Gaaroodinews) – Dawladaha Somaliland iyo Taiwan, ayaa kala saxeexday heshiis caafimaad oo dib loogu casriyaynayo Cisbitaalka guud ee Hargeysa, isla-markana lagu keenayo dhakhatiir u dhashay dalka Taiwan.
War-bixin laga soo saaray heshiiska ayaa lagu yidhi Sidan :-
” Heshiiskan waxa si weyn loogu casriyeyn doonaa Cisbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa, Sidoo kale waxa Cisbitaalka ka hawl-gali doona dhakhaatiir waaweyn oo dalka Taiwan ka socda oo si rasmi ah uga shaqayn doona Cisbitaalka”.
Labada dhinac ayaa sidoo kale kala sexeexday in Taiwan ay tababarto boqollaal hawl-wadeeno caafimaad ah, sidoo kalena maal galiso dhismayaal cusub oo lagu kordhindoono Cisbitaalka wayn.
Wejiga koowaad ee heshiiska ayaa socon doona muddo 5 sano ah, kadibna dib u cusboonaysiin ayaa lagu samayn doona.
Dhinaca kale, Somaliland waxa heshiiska u saxeexay wasiir ku-xigeenka Arrimaha dibedda Liibaan Yusuf Cismaan, dhinaca Taiwan na wasiirka arrimaha dibedda Joseph Wu, inkasta oo uu heshiiskaasi u dhacay habka Online ah ama Maqal iyo Muuqaal ah.